Hollywood/Bollywood | Filmy Bazar in Nepal
Category Archives: Hollywood/Bollywood
एजेन्सी । बलिउड बिबादको कारण चर्चामा आएको फिल्म ‘पद्मावती’ रिलिज भएको चार दिन भएको छ । सन्जय भंसाली निर्देशित तथा रणवीर सिंह , दीपिका पादुकोण र शहिद कपुर अभिनित यो फिल्म छाँयाकन देखि नै विवादमा परेको थियो ।केहि समय अघि बिबादका कारण दिपिका र निर्देशक संजय भंसालीको टाउकोको मुल्य समेत तोकिएको थियो । संजय लीला भन्साली निर्देशित फिल्मलाई भारतमा भने ...	Read More »
एजेन्सी । फराह खानले बलिउड चलचित्र क्षेत्रमा पाइला राखेको २५ वर्ष भएको छ । कोरियोग्राफरबाट निर्देशक बनेकी उनी यो क्षेत्रमा निकै संघर्षपछि स्थापित भएकी हुन् । कसरी बुवाआमाको सम्बन्धविच्छेदपछि आफ्नै बल र प्रयासमा फराहले यो सफलता पाएकी हुन् ।९ जनवरी १९६५ सालमा फराह खानको जन्म भएको थियो । आमाबुवाको सम्बन्धविच्छेद भएपछि फराह र उनका भाइ साजिद खानलाई आफ्नो जीवनमा निकै ...	Read More »
एजेन्सी । बलिउड नायिका प्रियंका चोपडालाई न्युयोर्कको सडकमा एक पुरुषले चुम्बन गरेको तस्विर अहिले इन्टरनेटमा भाइरल बनेको छ । यो दृष्य रियल भने होइन । हलिउड सिरियल ‘क्वान्टिको -३’का लागि उक्त दृश्य खिचिएको हो ।जुन दृष्यमा प्रियंकालाई एलन पावेलले चुम्बन गरेका छन् । उक्त दृष्यमा प्रियंका कालो रङको लामो ड्रेसमा छिन् भने एलन कोट पाइन्टमा । एजेन्सीहरुले उल्लेख गरे अनुसार ...	Read More »
बन्ने भयो क्रिस ४
एजेन्सी । बलिउड चलचित्र क्रिस ४ ले रिलिज मिति घोषणा गरेको छ । गत हप्ता निर्देशक राकेश रोशनले आफ्नो छोरा अभिनेता ऋतिक रोशनको जन्मदिनमा चलचित्र निर्माणसँगै रिलिज मिति घोषणा गरेका हुन् ।चलचित्र २०२० को डिसेम्बर ४ मा रिलिज हुने भएको छ । यसका अघि कोही मिल गया, क्रिस, क्रिस २ र क्रिस ३ रिलिज भइसकेको छ । यी सबै चलचित्रलाई ...	Read More »
शिल्पा बनिन् बिग बोस
एजेन्सी । अन्तत बिग बोस सिजन ११ कि विनर शिल्पा सिन्दे बनेकी छिन । १९ प्रतिष्प्रधिबाट सुरु भएको यस सिजनको कार्यक्रममा उनले आफुलाई विनर बनाउन सफल भएकी हुन् । विकास गुप्ता र हिना खानलाई पछी पार्दै शिल्पा विनर बनेकी हुन् । सलमान खान होस्ट भएकै कारण चर्चामा रहेको शो झन्डै ३ महिना चलेको थियो । कलर्स टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने यस ...	Read More »
यी हुन् नाङ्गै सुत्ने बलिउड अभिनेत्रीहरु
एजेन्सी, बलिउडमा बिभिन्न गसिपहरु बाहिर आईरहन्छन् । बलिउड कलाकारको उठ्ने बस्ने खाने देखि उनिहरुले लगाउने भित्री कपडा समेत समाचारको लागि राम्रै मसला बनिरहेको हुन्छ । यस्तै एक मसला छ बलिउडका कुन कलाकार के लगाएर सुत्छन् भन्ने । आम मानिसले सोचे भन्दा फरक उनीहरु नाङ्गै सुत्ने गरेका छन् । हेर्नुहोस् को को सुत्छन् त नाङ्गै ।ज्याकलिन फर्नान्डेज ज्याकलिन फर्नान्डेज नाङ्गै सुत्छिन् ...	Read More »
बलिउडमा अर्की पोर्नस्टारको उदय
एजेन्सी । चर्चित निर्माता राम गोपाल बर्माले अमेरिकी मुलकी युरोपियन पोर्नस्टार मिया मालकोवालाई बलिउडमा भित्र्याउन लागेका छन् । उनले मियासँग ‘गड, सेक्स एण्ड ट्रुथ’ नामको एक भिडियो समेत खिचेका छन्।मियाले विहीबार ट्वीटरमार्फत रामगोपालसँग काम गर्न पाएकोमा आफू उत्साहित भएको बताउँदै उनले भनेकी छिन्– ‘म सन्नी लियोनीपछि भारतीय फिल्म निर्देशकसँग काम गर्ने दोस्रो अडल्ट स्टार हुँ।’ ‘गड, सेक्स एण्ड ट्रुथ’को ट्रेलर ...	Read More »
सन्नी लियोनीलाई पछि पार्ने को हुन यिनी ?
एजेन्सी । वेव सिरिज ‘रागिनी एम एम एस रिर्टन्स’ मा देखिने अभिनेत्री करिश्मा शर्माका केहि हट फोटोहरु सार्वजनिक भएका छन् । उनले हट अवतार र बोल्ड अवतारको मामलामा ठुला अभिनेत्री लाई समेत चुनौती दिएकी छिन् ।यतिखेर करिश्मा हट फोटो सुटको कारणले चर्चामा छिन् । करिश्माले आफ्नो पछिल्लो फोटो सुटका केहि तश्बिरहरु आफ्नो इंस्टाग्राममा राखेकी छिन् । पबित्र रिस्ता र महोबत्ते ...	Read More »
टिभी स्टारकी नातिनीको न्यूड फोटोले हंगामा
मुम्बइ। भारतीय टिभी सिरियलका चर्चित निर्माता रामानन्द सागरकी नातिनी साक्षी चोपडाले इन्स्टाग्राममा आफ्नो न्यूड फोटो शेयर गरेपछि टिभी इण्डष्ट्रीमा हंगामा भएको छ । १९९० को दशकमा रामायण सिरियल बनाएका रामानन्द सागरकी नातिनी साक्षी सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय छिन् ।साक्षीले इन्स्टाग्राममा आफ्नो न्यूड फोटो शेयर गरेपछि संस्कारी सिरियल बनाउने हजुरबुवाकी नातिनी यतिसम्म हट भएको भन्दै चर्चा बढेको छ । १९ वर्षकी ...	Read More »
रवी तेजाको यस्तो एक्सन ? (भिडियो)
२३ पौष,काठमाण्डौ । साउथ स्टार मानिने रवी तेजाको नयाँ फिल्मको टिजर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक टिजरमा रवीको एक्सनलाई मात्र देखाइएको छ ।‘टच चेसी चुदु’ नाम राखिएको फिल्ममा रवी स्लिमका साथै एक्सन स्टारको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरेका छन् । पुलिसको भूमिकामा रहेका रवीको फ्यान बलिउडमा पनि उत्तिकै छन् । खासगरी उनि अभिनित फिल्मलाई बलिउडले राउडी राठोर नाम राख्दै रिलिज गरेको ...	Read More »